Sandesh Prawahके तपाईमा ग्यास्ट्रिक छ? पेट दुखाई कम गर्ने बिधि यस्तो छ। - Sandesh Prawah
के तपाईमा ग्यास्ट्रिक छ? पेट दुखाई कम गर्ने बिधि यस्तो छ।
बुधबार १३ आश्विन, २०७८
एजेन्सी- आजको समयमा गलत खानपानको कारण धेरै मानिसहरुलाई ग्यास सम्बन्धित समस्या हुने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई यसैसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा जानकारी दिनै छौँ । एउटा यस्तो पात चबाउनुहोस् जसले १० मिनेटमा नै तपाईको पेटमा भएको ग्यासलाई तुरुन्त राहत दिनेछ र तपाईको यो समस्या पनि टाढा हुनेछ।
पत्थरचट्टाको बिरुवा:- आयुर्वेदमा पत्थरचट्टालाई भष्मपथरी,पाषणभेद र पणपुट्टीस्को नामले पनि चिनिने गरिन्छ भने मोडिकल साइन्समा यसलाई Bryophyllum pinetum पनि भन्ने गरिन्छ । यो बिरुवा मानिसको स्वास्थयको लागी अधिक लाभकारी छ । यसले ग्यासको समस्यालाई जरैदेखी निमूर्ल पार्दछ । यसकाे प्रयाेग गर्ने तरिका:-
१) यदि तपाईलाई ग्यासको समूया छ भने तब तपाई बिहानको समयमा यसको एउटा पातलाई चबाउनुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा ग्यासको समस्या हुनेछैन । यदि तपाईको पेटमा ग्यास समस्या कहिल्यै हटेकै छैन भने पनि यो खाएपछि तुरुन्त ग्यास समस्या हट्नेछ ।
२) तपाईलाई थाहा छैन होला कि पत्थरचट्टामा सुठो मिलाएर सेवन गर्नाले पेटमा भएको दुखाईबाट राहत मिल्दछ । यसले पेटको दुखाई कम हुन्छ ।
३) आयुर्वेदको अनुसार यसमा कैयौँ औषधीय गुणहरु मिल्दछन् र यसले किड्निमा भएको पत्थरीको समस्यालाई पनि समाप्त गर्न मदत गर्छ ।
दम र खोकी: पुदिनाको पात पानीमा पकाइ पिउँदा दम र खोकीमा सुधार हुन्छ । घाँटी बढी खसखस भएर खोकी लागेमा पनि यसको प्रयोगले फाइदा पुग्छ ।